﻿	Air Fryer ငါးနှင့်ချစ်ပ်များ (လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အေးခဲသောရေဘူးများကိုသုံးပါ။ ) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
သံပုရာ meringue ပိုင်ရေခဲသေတ္တာခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး
Air Fryer ငါး & ချစ်ပ်များ
ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး crunchy ငါးအသားလွှာလေနှင့်အတူအလွယ်တကူလုပ်အစားအစာတစ်ခုလုံးအဘို့အအိမ်လုပ်ကြော်နှင့်အတူလေနှင့်ကြော် -based နေကြသည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Fave Air-Fryer ငါး
ဤစာရွက်တွင်မည်သည့်အဖြူရောင်ငါး (မြင်းကျား (သို့) halibut) ကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာနူးညံ့ပြီး flaky ထွက်လာပါတယ်။
ဤစာရွက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဆတ်သော (သို့မဟုတ်အေးခဲနေသော) အသားလွှာ (သို့) halibut များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအဖုံးကိုမကပ်မီအပြည့်အဝအရည်ပျော်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ မည်သည့်အဖြူရောင်ငါးကိုမဆိုအစားထိုးနိုင်သည်။
ငါးကိုကြက်ဥ၌နှစ်ပြီးလျှင်ထည့်ပါ pancake ရောနှော ။ pancake ရောနှောမှုသည်ဤစာရွက်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ငါးများကိုကြည်လင်သောသုတ်လိမ်းရန်အတွက်အရသာရှိသောပေါင်မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကျောက်တုံးကိုတူးထုတ်သည်။
သူတို့က starchy နေကတည်းက, russet အာလူးဒီစာရွက်ထဲမှာကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လုပ်သည့်အခါလိုပဲ မီးဖိုကြော် အပြင်ဘက်ရှိဓာတ်အချို့ကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းမွန်စွာကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ရေတွင်အနည်းငယ်စိမ်ထားပါသည်။
ငါးသို့မဟုတ်အာလူးအတွက်အကြိုက်ဆုံးရာသီရောစပ်မှုရှိပါသလား။ ဒါကိုပေါင်မုန့်ထဲထည့်ပြီးအာလူးပေါ်ဖြန်းပြီးကြော်ပါ။ သို့မဟုတ်, ငါတို့ကဲ့သို့အိမ်တွင်းရာသီရောနှောစမ်းသပ်ကြည့်ပါ Taco , ဂရိ , ဖိုင်တာ , Cajun သို့မဟုတ်ပင်အမှုန့် မွေးမြူရေးခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမားရောနှော !
Air Fryer တွင်ငါးကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲ
အကြော်ကြော်၊ ဆီနှင့်ရာသီအတွက်ပစ်ချပါ။ လေအေးစက်ထည့်ပါ။
ငါးကိုထမင်းပြီးလေပူအောင်ထည့်ပါ။ flaky သည်အထိချက်ပြုတ်။
ရေခဲသေတ္တာတွင်ငါးချက်ပြုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာငါးလွှာတစ်ပုံစံတည်းအရွယ်အစားသေချာစေရန်နှင့်ပေါင်မုန့်ကိုတစ်ဝက်စီတွင်ဖိအားတစ်ခုစီထားရန်ဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်ကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ငါးထဲသို့ဖိထည့်ရန်အပိုင်းအစတစ်ခုစီသည် crispy crunchy morsel သို့ကြော်သည်။
ကျန်ကြွင်းသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုလုံခွုံသောကွန်တိန်နာတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲရှိဇစ်အိတ်တစ်လုံးထဲတွင် ၃ ရက်အထိအတူတူထားပါ။
ငါးနှင့်အာလူးကြော်များကိုအပူပေးရန်နှင့်ပြန်လည်သန့်စင်ရန်အတွက် ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်အပူပေးသည်အထိ ၅ မိနစ်ခန့်ခန့်ထားပါ (အပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်) ။ အဆိုပါမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ကျောက်ချဉ်ပြားဆော့စ် !
ငါတို့ကလေအေးစက်ငါးနဲ့ချစ်ပ်တွေကိုချစ်တယ် မြဝတီ နှင့် cob အပေါ်ပြောင်းဖူးဖုတ် !
Air Fryer အကြိုက်ဆုံးများ
Air Fryer ကြက်သားတင်ဒါများ - ဝါရင့် & ပေါင်ထားသော
Air Fryer ဘေကွန် Scallops ထုပ် - ချိုမြိန်ငန်သောငန်သောအရသာ
Air Fryer ကင် - မိနစ် ၂၀ အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Air Fryer ဝက်သားခုတ် - တစ်နာရီအောက်၌အဆင်သင့်
Air Fryer ကြက်သား - အရည်ရွှမ်း & အရသာ
Air Fryer ကြက်သားအတောင်များ - မိနစ် ၃၀ သာကြာသည်
Air Fryer ဆော်လမွန် - လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အေးခဲနေသောအသားများကိုအသုံးပြုပါ
Air Fryer ကြက်ဥအလိပ် - crispy & အရသာ
သင်၏မိသားစုသည်ဤ Fryer Fish & Chips များကိုနှစ်သက်ပါသလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စာရေးသူHolly Nilsson ဤငါးနှင့်ချစ်ပ်များသည်ရွှေမကုန်မှီတိုင်အောင်ပေါင်မုန့်၊ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် Russet အာလူး
▢နှစ် ဇွန်း သံလွင်ဆီ
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားဆား
▢1 ½ အလေးချိန်ပေါင် ကော့ပြား သို့မဟုတ်အခြားအဖြူရောင်ငါး
▢၁ ခွက် pancake ရောနှော
▢½ ခွက် နို့
▢၁ ခွက် panko ပေါင်မုန့်အစအန
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပင်လယ်အော်ရာသီဟောင်း
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်း တစ်ခုချင်းစီကို
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပုဇွန်
အကင်ညစာအတွက် leeks ချက်ပြုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ရေခဲသေတ္တာကိုရေအေးကြီးထဲထည့်ပြီးမိနစ် ၃၀ လောက်စိမ်ပါ။ ကောင်းစွာယိုစီးနှင့်ခြောက်သွေ့တဲ့ DAB ။
ရေနံနှင့်ဆားနှင့်အတူ Toss ကြော်။
လေပူစက်အား ၃၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိအပူပေးပါ။
အာလူးများကိုတောင်းထဲထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ။ အာလူးများကိုလှုပ်ပြီးနောက်ထပ် ၆-၈ မိနစ်ခန့်ပြတ်သည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ လေပူစက်မှပန်းကန်ပေါ်တင်ပါ။
ကြော်ချက်ပြုတ်နေစဉ်ငါးများကိုပြင်ဆင်ပါ။ pancake ရောနှောကိုရေတိမ်ပိုင်းတွင်ထားပါ။
စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါနှင့်ငါးခြောက်အောင်လုပ်ပါ။ ကြက်ဥအရောအနှော၌နှစ်ပြီးသောအခါ pancake အရောအနှောသို့။
နောက်ကျောကြက်ဥအရောအနှောသို့နှစ်ပြီးလျှင်, ပေါင်မုန့်အစအနသို့။ ချက်ပြုတ်မှုန်ရေမွှားနှင့်အတူရက်ရက်ရောရောလေပေါ်မှာ။
fries တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ငါးဖမ်းစက်ထဲထည့်ပြီး ၃၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ၁၂ မိနစ်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ ချက်ပြုတ်ပြီးမွှေပေးပါ။ မမှီပါနှင့်
ထမင်းပေါင်းအိုးထဲအပူပြန်ရရန် ၁-၂ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။
ငါးချက်ပြုတ်ချိန်သည်အထူပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ပိုထူသောအအေးခန်းများသည်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။ အသုံးအဆောင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သော်လည်း fries ကိုမိနစ်အနည်းငယ်စောပြီးစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါကအချိန်ပိုထည့်ရန်လွယ်ကူသည်။
To Make More Fries သည်သေးငယ်သည့်အစုများစွာကိုချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ အစေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်ကြော်ကြော်အားလုံးကိုထည့်ရန်နှင့်ကြော်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ၃၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် ၂-၃ မိနစ်ခန့် (သို့) အပူပေးသည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးAir Fryer ငါးနှင့်ချစ်ပ်များ၊ Air Fryer ငါးနှင့်ချစ်ပ်စာရွက်များ၊ အကောင်းဆုံးငါးနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ လေပူစက်ထဲတွင်ငါးနှင့်ချစ်ပ်များပြုလုပ်နည်း။ သင်တန်းညစာ၊ Entree၊ ငါး၊ အဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။